Fanarenana ny Faritra Alaotra Mangoro | Primature
Mahazoarivo, faha 27 janoary 2020–Tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny delegasiona notarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany, nijery ifotony ireo distrika tena voamafy sy ny vahoaka tra-boina, vokatry ny rotsak’orana niteraka tondra-drano izay nitranga tamin’ny herinandro lasa teo.
Nitsidika ny kaomina Ambatomainty, distrikan’Amparafaravola ny delegasiona ka nijerena ireo izay tena laharam-pahamehana amin’ny fanarenana atao. Misy ireo làlana tapaka, digue simba sy fahavoazana maro ka izay indrindra hoy ny Praiministra, no nitondrana ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta, toy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny Asa vaventy, ny minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono, ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana; mba hahafahana mijery ireo fotodrafitrasa simba ary mijery ny fanarenana izany ao anatin’ny fotoana fohy. Hojerena haingana ny radier ao Ambatomainty ary efa mikaon-doha ireo minisitra, amin’ny fijerena ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra mandritra izao fanarenana izao.
Ary taorian’izay dia nitarika dinikasa niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny Praiminisitra. Fivoriana izay nitadiavana vahaolana hamerenana ny fiainan’ny mponina andavan’andro amin’ny laoniny, tapaka ary fa miantomboka rahampitso ny asa fanarenana ny RN44 ary ny alakamisy kosa ny RN3A, mba ahafana mamerina ny famatsiana ny solika izay iankinan’ny sehatry ny famokarana. Eo ihany koa ny fanarenana ireo tohadrano roa lehibe izay iankinan’ny lemak’i Alaotra, ary ny fandefasana ireo fitaovana entina hamonjena ireo olona izay mbola miaina ao anaty rano. Notsiahivin’ny Praiminisitra fa tokony hiara-hisalahy ireo tompon’andraikitra rehetra any an-toerana amin’ny fandrindrana ny asa rehetra amin’izay fanarenana izay.
Voin-kava mahatratra, ka anisan’ny anton-dian’ity delegasiona ity koa, ny fitondrana fanohanana ara-tsakafo hanampiana ireo izay tena mila izany. Anisan’ireo fanampiana nentin’ireto solontenam-panjakana ireto ny vary 13, 800 taonina, voamaina 20 lasaka amin’ny 50kg, menaka 900 litatra, savony 93 baoritra ary siramamy 16 lasaka amin’ny 50kg. Mahakasika izay fanampiana izay indrindra, dia nosoritan’ny Praiministra fa amin’ny fotoana tahaka izao dia misy ny manararaotra manodikondina ireo fanampiana omena ny tra-boina. Koa nanentana ny tompon’andraikitra sy ny vahoaka ny Praiministra, mba hatao ao anatin’ny mangarahara sy ny fahitsiana ny fitsinjarana ireo fanampiana ireo ; mila miova, hoy izy, ny toe-tsain’ny olona mandray andraikitra. Ka antenaina fa tena ho tonga any amin’ireo olona tokony hisitraka azy ireo fanampiana ireo fa tsy hisy ny fanodinkodinana, ary ny vahoaka ihany koa raha mahita ny fanodinkodinana dia tokony ho sahy mijoro manambara izany, hoy hatrany ny Lehiben’ny governemanta.
Tsy nohadinoin’ny Lehiben’ny governemanta ny naneho ny fiaraha-miory tamin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta, ho an’ny fianakavian’ireo namoy ny ainy noho ny hetraketraky ny natiora sy nirariany fahasitranana haingana ho an’ireo izay naratra ary nankaherezany ireo Havana sy tapaka tra-boina.
← Déclaration de sinistre national
Famindram-pitantanana teo amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny →